२०७६ कार्तिक २२ शुक्रबार ०६:४८:००
सुस्तामा नयाँ पत्रिका : नारायणीपारि सुस्तामा तीन हजार नेपालीको बसोवास छ, तीमध्ये धेरैसँग लालपुर्जा छैन, जोसँग लालपुर्जा छ तिनको जमिनमा भारतीयले खेती गर्छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीको आडमा सीमापारिका बासिन्दाले नेपालीलाई त्रासमा राखेका छन्, कहिले कुटपिट गर्छन्, कहिले घरमै आगो लगाइदिन्छन् । भारतबाट प्रताडित र नेपालबाट उपेक्षित सुस्ताको जीवन सधैँ आपत् विपतमा छ ।
सुस्ताको सास्ती : नारायणीपारिको नेपाली बस्ती सुस्तामा तीन हजार नेपालीको बसोवास छ । तर, उनीहरूलाई राज्यको मूलधारसम्म जोड्ने एउटा पुलसमेत छैन । गाउँमा ६ कक्षाभन्दा माथि विद्यालय छैन, प्राथमिक उपचार गर्न हेल्थपोस्टसमेत छैन । उज्यालो बाल्न बिजुली छैन र किनमेल गर्न बजार छैन । यी सबै आवश्यकताका लागि उनीहरू भारतमा निर्भर छन् । तर, तिनै भारतीयले सुस्तावासीको खेतबारी कब्जा गरेका छन्, घरवास उठाउन खोजेका छन् । नेपाल सरकार मौन छ । तस्बिर : सतिश पोखरेल
तर, ०३४ सालमा आएको बाढीले तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायतलाई जलमग्न बनाइदियो । स्थानीय बासिन्दा घरबारविहीन भए । विस्थापित भएकाहरू लाखापाखा हुँदै साहुमारा, ठट्टेखोला, केउलानीसम्म पुगे । उनीहरूमध्ये केहीले त्यतै जमिन पाए । जमिन नपाएकाहरू पुरानै बस्तीमा फर्किन बाध्य भए । ‘मान्छे मात्र होइन, सुस्ता पनि पुरानै अवस्थामा फर्कियो । चहलपहल बढ्यो । सुस्ता खाली भएपछि खुसी भएका भारतीयहरू फेरि दुःखी भए । त्यसैले उनीहरूले हामीलाई यातना दिन थाले । सिमाना पनि मिच्दै अघि बढे,’ सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
भारतीयले धकेल्दै ल्याउँदा वास्तविक सिमानाबाट १७ किलोमिटर माथिसम्म ल्याएका छन् । ‘अहिले त सीमास्तम्भ नै छैन, जंगेपिलर छैन, देशको सिमाना हो, तर कुनै हिसाब–किताब नै छैन,’ गुरुङ भन्छन् । सुस्तामा नेपालको वास्तविक भूमि ४० हजार नौ सय ८० हेक्टर हो । १४ हजार हेक्टर भूमि भारतीयले अतिक्रमण गरेका छन् भने नेपालसँग औपचारिक रूपमा सात हजार हेक्टरमात्रै बाँकी छ । बाँकी १९ हजार नौ सय ८० हेक्टर जमीनलाई विवादित क्षेत्र भनिएको छ । अतिक्रमण अझै रोकिएको छैन । नारायणी नदीमा भारतीय पक्षले अग्लाअग्ला तटबन्ध र पर्खाल लगाएका छन् । त्यसैले नदीको धार नेपालतर्फ धकेलिँदै छ ।
सीमा सुरक्षा गर्न भनेर बसाइएको बस्तीका बासिन्दासँग देशको नागरिकतासमेत छैन । सुस्तामा अहिले दुई सय ६५ घरधुरीका तीन हजार एक सय ३३ बासिन्दा छन् । एक हजार आठ सय बालिग छन्, जम्मा तीन सयलाई मात्र राज्यले नागरिकता दिएको छ । नागरिकता वितरण गर्न ०६३ मा त्रिवेणीसम्म पुगेको टोली सुस्ता नपुगी फर्कियो । ‘भारतीय फौजसँग जुधेर सीमा सुरक्षा गर्ने हामी तर हामीलाई सरकारले नागरिक मानेको छैन । सरकारको अपहेलना सहेर पनि हामी देशका लागि जुधिरहेका छौँ,’ स्थानीय बेचनी यादव भन्छन् ।
अनौठो ! सुस्तामा सरकारले जनता आवास कार्यक्रम लगेको छ । तर, नागरिकता नै नभएकोले यो सरकारी कार्यक्रम सुस्तावासीका लागि मजाक भएको छ । सरकारको राहत पाउने त परैको कुरा, आफ्नै लगानीले बनाएको घर जोगाउन पनि सुस्ताबासीलाई सास्ती छ । नेपालीको घरबास नै उठाउने भारतीय पक्षको योजना छ । त्यसैले स्थानीय बासिन्दालाई घरसमेत भत्काउन उर्दी जारी गर्दै आएका छन् । ‘चार वर्ष पहिले मैले घर बनाउँदै थिएँ, अचानक भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को टोली आँगनमै आयो । घर बनाउन पाउँदैनस्, जति बनाएको छस्, त्यो पनि भत्का भनेर धम्क्याउन थाले,’ स्थानीय रवीन्द्र जैसवालले भने । उनले जसोतसो घर त बनाएका छन् तर सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
भारतको प्रताडनामात्र होइन, नेपाली राज्यको उपेक्षाले पनि सुस्ताबासी पीडित छन् । नेपालतर्फ नारायणी नदीमा पुल नभएकोले किनमेल गर्र्न भारतीय बजारमा जानुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । नुन–चामल किन्न जाँदा भारतीय फौजले कुटपिट गर्छ, चामल पोखिदिन्छ । स्थानीय बेचनी यादव भन्छन्, ‘नेपाली होस् भने नागरिकता देखा भन्छन्, हामीसँग छैन । त्यसो भए कुन देशको नागरिक होस् भनेर अपहेलना गर्छन् । बिरामी भएर अस्पताल जान्छु भन्दा पनि फर्काइदिन्छन् ।’ गत वर्षमात्रै पनि नेपाली भूमिमा भारतीयले डोजर चलाउन थालेपछि स्थानीय जनता अवरोध गर्न गएका थिए । त्यसको प्रतिशोधमा भारतीयले आफ्नो भूमिबाट नेपालीलाई आवत–जावत गर्न निषेध गरे । पुरानो बाटो बन्द गरेपछि बजारतर्फ जाने गरी नयाँ बाटो खोल्न स्थानीय नेपालीले गत वर्ष १५ भदौमा कल्भर्ट बाँध्दै थिए । अचानक एसएसबीको टोली आएर काम तत्काल रोक्न निर्देशन दियो । ‘काम नरोके तिमीहरूलाई गोलीले उडाइदिन्छौँ भनेर धम्की दिए । त्यो भूमि नेपालको हो तर, हामीलाई सुरक्षा दिन नेपाली सुरक्षाकर्मी आएनन् । ज्यान गए जान्छ, आफ्नो भूमिमा कल्भर्ट बनाउँछौँ भनेर हामीले बनाइछाड्यौँ,’ जैसवाल भन्छन् । तर, ज्यानै जोखिममा राखेर भारतीय बजारमा जानुपर्ने बाध्यता कहिले अन्त्य होला ? जैसवालको चिन्ता छ । ‘बरु सरकारले नारायणीमा पुल बनाइदिए नेपाली बजारमै आवतजावत हुन्थ्यो, सरकारसँग सम्बन्ध पनि बलियो हुन्थ्यो । भारतीयसँग लड्न पनि आत्मबल हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।
नागरिकता नभएकोले अधिकांशसँग लालपूर्जा पनि छैन, जोसँग लालपूर्जा छ तिनको जमीनमा भारतीयले खेती गर्छन् । नेपालीहरूको खेतमा हुलका हुल प्रवेश गरेर बाली लगाउने र उठाउनेलाई भारतीय फौजको संरक्षण छ । ०६५ सालमा एकैपटक ५०/६० वटा ट्रयाक्टर लिएर भारतीयहरूले नेपालीहरूको खेत जोतेका थिए । नेपालीहरूले आवाज उठाए तर भारतीय फौजले उल्टै दमन गर्‍यो, नेपालले सुन्दै सुनेन । नेपाली सुरक्षाकर्मी आफै पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् ।
एसएसबीको डरले सुस्ताबासी आफ्नै खेतबारीमा समेत जान डराउँछन् । स्थानीय ओसियर खाँ भन्छन्, ‘हाम्रै जमीन भारतीयले अतिक्रमण गरेका छन्, त्यहाँ गयो भने कुट्छन्, पिट्छन्, मुद्दा लगाइदिन्छन् । त्यसैले आफ्नै भूमिमा टेक्नसमेत पाउँदैनौँ ।’ खाँकै हजुरबा आफ्नै खेतमा गएको वेला १० वर्षअघि एसएसबीद्वारा समातिएका थिए । उनलाई विवादित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भनेर भारतमा मुद्दा चलाइयो । चार वर्ष जेल बसेर फर्किएको केही समयपछि उनको मृत्यु भयो ।
ओसियरको घरभन्दा दक्षिणतिर ५७ बिघा भूमिमा १५ जनाको खेत छ तर नेपालीले खेती गर्न पाउँदैनन् । ‘लालपूर्जा हामीसँग छ तर आफ्नै खेतमा जान पाउँदैनौँ । नम्बरी जग्गा हो तर अहिले चौर भएको छ,’ स्थानीय ओमप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘कुनै दिन त्यो भूमि हाम्रै होला भन्ने आशा छ । नजिक जान त सक्दिनँ, त्यसैले टाढैबाट हेरेर फर्कन्छु ।’सुस्तामा ६ कक्षासम्म मात्र स्कुल छ । त्योभन्दा माथि पढ्न असम्भव जस्तै छ । बेचनी भन्छन्, ‘मेरा तीन छोराले पढ्न पाएनन् । नारायणी तरेर दैनिक नेपालको विद्यालयमा पुग्न मुस्किल छ, नजिकै भारतीय स्कुल त छ तर नेपाली भनेर लखेटिदिन्छन् । त्यसैले मैले छोराछोरीलाई पढाउन सकिनँ । पढेको भए दुई/चार अक्षर चिन्थे होला तर अहिले घरमै छन् । भविष्यमा मैले जस्तै दुःख पाउने हुन् ।’ सुस्तामा विद्यालयमात्र होइन, हेल्थ पोस्ट छैन, बिजुली छैन । समग्रमा जीवन छैन । भारतको दमन र नेपालको उपेक्षा कहिलेसम्म हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
ओमप्रसाद चौधरी भन्छन्– आफ्नै खेतमा जान पाउँदिनँ, टाढैबाट हेरेर फर्कन्छु
भारतको नयाँ नक्साबारे नेपालले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट बिहीबार भारत पनि बोलेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले नयाँ नक्सामा नेपाली सिमाना संशोधन नगरिएको दाबी गरेका छन् । नयाँदिल्लीमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हाम्रो नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएका हौँ । नेपालसँग हाम्रो सिमाना संशोधन गरिएको होइन ।’ उनले निकटतम तथा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको मर्मअनुसार संवादबाट निकास निकाल्न भारत प्रतिबद्ध भएको पनि जनाएका छन् ।
कालापानीका सम्बन्धमा जन्मिएको विवादलाई उनले दुई देशबीच मतभेद बढाउन निहित स्वार्थ समूहहरूको कोसिसका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । भारतीय जवाफलाई नेपालका सरकारी संयन्त्रले भने कालापानीमा उसको दाबी प्रस्तुत गरेको अर्थमा बुझेका छन् । ‘नक्सामा पारिएको नेपालको कालापानीलाई भारतले सम्प्रभु क्षेत्र दाबी गरेको छ, यसलाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण बटुलेर स्पष्ट रूपमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ एक नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संवादबाट समाधान गरौँ भन्ने उसको स्पिरिट पनि व्यक्त भएको छ । अब शीघ्र छलफलबाट समस्या समाधान गर्ने वेला आयो भन्ने अर्थमा हामीले बुझेका छौँ ।’
नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा गाभ्ने भारतीय कदमविरुद्ध नेपालमा विरोधका स्वर बढ्ने क्रममा छन् । जनस्तरदेखि नेता र राजनीतिक दलसम्मले गलत हस्तक्षेपबाट पछि हट्न भारतलाई चेतावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीलाई टेलिफोन गरी कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको स्मरण गराएका छन् ।
‘भारतको नयाँ नक्साप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सभापतिले कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको तथ्य स्मरण गराउनुभएको छ,’ बिहीबार अपराह्न देउवाले पुरीलाई टेलिफोन गरेपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेसले यस्ता विवादमा देशका सबै शक्तिले साझा मत बनाएर अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ । साझा मतको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारले कूटनीतिक हल खोज्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । ‘हाम्रा कुनै पनि भूमिमाथि हुने अतिक्रमण हाम्रा लागि अस्वीकार्य छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
बिहीबार पोखरामा पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका लागि सिंगो देश एकढिक्का रहने बताए । ‘लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच सहमति हुँदा संयोगवश म भारतमै थिएँ । मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यो गलत भयो, पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेको हुँ,’ प्रचण्डले भने, ‘अहिले त कालापनीलगायत भूभाग नक्साभित्रै पारिएको छ, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्तामा कहीँ–कतै सम्झौता गर्ने, लचिलो हुने भन्ने सवाल नै छैन ।’ सरकारले आफ्नो धारणा राखिसकेकाले अब कूटनीतिक पहल हुने प्रचण्डले बताए ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको नेपालको पश्चिम–उत्तर सिमानालाई चलाउने अधिकार कसैलाई नभएको चेतावनी दिएका छन् । महाकाली नदीले नै सिमाना निर्धारण गरेको र लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीनदी (कुटी याङदी) नै महाकाली भएको खनालले बताएका छन् । ‘नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरिसकेको छ । त्यो सिमानालाई चलाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन,’ खनालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालको सिमाना स्पष्टतः महाकाली नदीबाट निर्धारित भइआएको छ । महाकाली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी (कुटी याङदी) हो । त्यस पूर्वका नापी, गुन्जी र लिपुलेकलगायत पनि नेपाली भूभाग हुन् ।’ खनालले ऐतिहासिक कालदेखिका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भारत सरकारसँग अविलम्ब वार्ता गरेर कूटनीतिक ढंगले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा दलका युवा संगठनले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध खबरदारी गरेका छन् । कैलालीको धनगढीमा नेकपासम्बद्ध राष्ट्रिय युवा संघ, तत्कालीन अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टमार्फत संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् । ‘नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,’ नेकपासम्बद्ध युवा नेता रमेश भट्टराईले भने, ‘नक्सा सच्याउनका लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, कञ्चनपुरमा बिहीबार पनि प्रदर्शन भयो । सदरमुकाम महेन्द्रनगर बजारसँगै जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि युवाले भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् । महाकाली नगरपालिकामा स्थानीय बासिन्दा र राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाली झन्डा र ‘गो ब्याक इन्डिया’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् । महाकाली नगरपालिका–१० स्थित कुतियाकबारलगायत सीमाका बस्तीमा प्रदर्शनपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन गरेका छन् । त्यस्तै, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका स्थानीयले पनि राताशिला चिहानघाटमा जम्मा भएर मोदीको पुत्ला जलाएका छन् ।
सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सबै शासकले भारतविरुद्ध बोल्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘कूटनीतिक ढंगले कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको देखिँदैन, यो नेपालीका लागि दुखद हो ।’ नेपालले आफ्नो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, सीमा सुरक्षा अवधारणा ल्याउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए । नागरिक समाज रोल्पाका संयोजक घनश्याम आचार्यले राष्ट्रियताको पक्षमा एकताबद्ध विरोध जरुरी रहेको बताए ।
दिल्लीको मुस्लिम धार्मिक सभाबाट भागेर आएका दुईजना सुस्ताबाट पक्राउ
गृहमन्त्री बादलका दुई वर्ष : सुस्ताए गृहमन्त्रीका आक्रामक योजना
सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद गम्भीरः प्रचण्ड
सुस्तावासीको संघर्ष ‘जंगेपिलर’
सास्ती खेपिरहेको सुस्ता
सुस्ता गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण